CHINAPLAS2019 Yakanakisa Midziyo - Imwe Mould Double Outlet PP Hollow Kuvaka Template Kugadzira Line - CHINA JWELL Machinery Co., Ltd.
CHINAPLAS2019 Yakanakisa Midziyo - Imwe Mould Double Outlet PP Hollow Kuvaka Template Kugadzira Line
Imwe mold mbiri inoburitsa PP hollow kuvaka template yekugadzira mutsara
The yekugadzira tambo yeiyo imwe mold mbiri inoburitsa PP isina mhango yekuvaka template ndicho chigadzirwa chitsva chakatangwa neChangzhou jwell piritsi Equipment Kugadzira Co, Ltd. pahwaro hwetsika 915mm imwechete yekugadzira tambo, iyo yanga ichingogara ichivandudza uye ichienderera ichisimbiswa. Iyo inogutsa yakakwira kuburitsa uye yakaderera simba kushandiswa, uye panguva imwechete, inowana yakanakisa chigadzirwa mhando kugadzikana.
1. Iyo yekugadzira tambo ine zvakanakira yakakwira kuburitsa, yakaderera simba kudyiwa, kuchengetedza nzvimbo yekugadzira uye basa, uye kuburitswa kwezuva nezuva kunogona kusvika zvinopfuura 1000 zvidimbu.
2. Mutsara wese une tekinoroji yepamberi, yekukurumidza yekugadzira tambo, yekuchengetedza simba uye inobudirira extruder, yakakwira extrusion vhoriyamu, yakanaka plasticization uye yakagadzikana yekufambisa.
3. Iyo yakasarudzika dhizaini yefa, kuisa ndiro, kutonhora sisitimu uye yekutsvaira system inovimbisa yekumhanyisa-kumhanyisa kutonhora uye kumisikidza kwe extrusion, yakagadzikana extrusion uye iri nyore mashandiro.
4. Yakasarudzika dhizaini inovimbisa kuti pamusoro pechigadzirwa hachimuki uye kutsetseka kunosangana nezvinodiwa zvekuvaka.
5. Iyo yekugadzira tambo inogona kuona imwe-mativi kana maviri-mativi co-extrusion, co-extrude nano-alloy zvinhu uye murazvo unodzora danda pamusoro peiyo template, uye kugadzirisa mashandiro eiyo template.
1. Iine polypropylene (PP) resin sechinhu chepasi, chigadzirwa chinonyanya kugarisana nharaunda.
2.Smooth uye inotsvedzerera pevhu, yakanaka kukanda mhedzisiro; hapana hunyoro hwekumwa, hapana deformation, hapana kuora, kwenguva refu kunyudzwa mumvura pasina stratification, hapana bubble, ndiro saizi kudzikama.
3. Nyore kugadzirisa, yakatwasuka uye yakatwasuka inogona kusunganidzwa zvisina tsarukano, kudonhedza kuri nyore, pasina kukwesha demoulding mumiriri, kubata iyo template kunogona kudonha, kupfupisa maawa ekushanda, chengetedza vashandi, uye kumhanyisa kufambira mberi kweprojekti.
4. Acid uye alkali kuramba, ngura kuramba, kwakanyanya kukodzera kwenzvimbo dzemahombekombe, migodhi, makungwa egungwa nemadhamu uye mamwe mainjiniya kunyorera, kushandisa nekuchengetedza hazvidi kuita chero anti-ngura kurapwa, usasvibisa pamusoro pekongiri.
5. Turnover inogona kushandiswa kanopfuura makumi mashanu nguva, uye hupenyu hwebasa hwakareba.
6. Zvigadzirwa zvemarara zvinogona kushandiswazve uye kugadziriswazve, uye zvishandiswazve mbishi zvigadzirwa zvinogona kushandiswa zvizere. Zvichienzaniswa nehuni formwork uye yemishenjere plywood, mutengo wezvinhu zvakasviba wakaderera uye mutengo wekuvaka unogona kuderedzwa zvakanyanya.
KUMASHURECHINAPLAS2019 Yakanaka Zvishandiso- TPU Firimu Yekuwedzera Line
NEXTCHINAPLAS2019 Yakanaka Zvishandiso- TPU Firimu Yekuwedzera Mutsara CHINAPLAS2019 Yakanaka